MainSidebar Archives – अभियान खबर
काठमाडौँ । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले साउन १६ गतेदेखि सर्वसाधारणमा ३३ करोड ९८ लाख चार हजार छ सय रुपियाँ बराबरको साधारण शेयर(आईपीओ) निष्काशन तथा विक्रि खुल्ला गर्ने भएको छ । रु. १००/– अंकित दरका ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता शेयरमध्ये ६७,९६१ कित्ता अर्थात २ प्रतिशत शेयर कर्मचारीहरुको लागि, १,६९,९०२ कित्ता अर्थात ५ प्रतिशत […]
दाङ हुँदै आइतबार फेरि सलहका झुण्ड नेपाल प्रवेश गरेका छन्। कति झुण्ड प्रवेश गरेको यकिन गर्न नसकिएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईंले बताए। ‘धेरै झुण्ड देखिएको छन्। आउने क्रम जारी छ, यति नै भन्न सकिन्न, विवरण संकलन हुँदैछ,’ उनले भने। केन्द्रका अनुसार आइतबार बिहान साढे नौ बजे भारतको उत्तर प्रदेशका सितापुर […]
काठमाडौं । संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका १ मा गएराति गएको पहिरोमा परि ११ जना बेपत्ता भएका छन् । आठवटा घर बगेका छन् । बेपत्ताको खोजी जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा डीएसपी नवराज मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिरोमा हराइरहेकाहरुको खोजी जारी छ ।
काठमाडौँ । समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई कारवाही गरेको छ । आज बसेको पार्टीको बैठकले उनलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरेको पार्टी प्रचार विभागका उपप्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए । नक्साका लागि हुन लागेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ताका लागि संसद सचिवालयमा सांसद गिरीले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनलाई असार ८ गते बसेको पदाधिकारीको बैठकले […]
काठमाडौं । बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने भएका छन् । संघीय संसदको अर्थ समिति बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार समितिलाई बुझाएको हो । योसँगै एक वर्षअघिदेखि हुँदै आएको विवाद अन्त्य हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र […]
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा ५४ जनासहित पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर १८० जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । काठमाडौँमा २४, ललितपुरमा २० र भक्तपुरमा १० जनामा संक्रमण देखिएको हो । सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.
२२ असार, काठमाडौं । मास्क नलगाई घरबाहिर निस्कनेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । अब मास्क नलगाई घरबाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गरी संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणको […]
काठमाडौं– आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज गायत्री, दीक्षा, वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइँदैछ। संस्कृत भाषामा ‘गु’ को अर्थ अन्धकार र ‘रु’ भन्नाले प्रकाश बुझिन्छ। ज्ञानरुपी प्रकाशले अज्ञानरुपी अन्धकारको नाश गराउने व्यक्तिलाई गुरु भनिने तन्त्रशास्त्र र धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र […]
हरेक व्यक्तिको भाग्य, व्यवहार र क्षमता फरक फरक रहेको हुन्छ । कोही बौद्धिक क्षमता बढी भएका हुन्छन् भने कोही कम बौद्धिकता भएका हुन्छन् । ज्योतिष शास्त्रले बताए अनुसार फरक फरक राशी भएका व्यक्तिमा बौद्धिक क्षमता पनि फरक हुने गरेको पाइएको छ । आज हामी बौद्धिक क्षमता भएका केही राशीको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ वृश्चिक राशी […]